Ndụmọdụ 4 Ka Mma Maka "Ijikọ ọha na eze" | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị na-agụ Martech Zone, Ohere inweta bụ mmadụ clued gị na ugbua na eziokwu na ọ ga-abụ ihe dị mkpa karịa mgbe ọ bụla iji nweta azụmahịa gị na-elekọta mmadụ nke afọ a. A nnyocha a na-adịbeghị anya anyị duziri maka GrowBiz Mgbasa ozi kpughere na 40% nke ndị obere na-eme mkpebi azụmaahịa na-eme atụmatụ iji mgbasa ozi mmekọrịta na 2012. Anụrụ m onye ọbịa n'oge na-adịbeghị anya Azụmaahịa nzuzu Radio Talk Show na-atụ aro na a ga-enye ndị ahịa niile ụlọ ọrụ mmekọrịta ha (Twitter, Facebook, wdg), ka ndị ahịa ha wee nwee ọsọ ọsọ, dị mfe, n'ụzọ doro anya iji ruo ha oge niile.
Enwere iwu ole na ole, ma ọ bụrụ na ọ bụla, siri ike na ngwa ngwa gbasara iji Social Media. Oru m dika Social Media Marketer maka Zoomerang, ma ugbu a SurveyMonkey, pụtara na amụtala m otu ihe ma ọ bụ abụọ banyere ihe na-arụ ọrụ na, nke ka mkpa, ihe na-adịghị arụ ọrụ. Ihe nzuzo nke Social Media Successga nke Ọma na-emeghe ka ịnwale ihe ọhụrụ, ịlele nsonaazụ gị, na iji usoro iji chọpụta ihe na-arụ ọrụ maka gị, akara gị, na ndị na-ege gị ntị. Mana enwere m usoro dị mfe 4 iji bido:
1. Echela. Jụọ
Ihe nzuzo iji wuo nnukwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ iji nye ndị na-ege gị ntị ihe dị mkpa, nke na-atọ ụtọ. Mana olee otu ị ga - esi mepụta ọdịnaya dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị maghị ndị na - ege gị ntị bụ? Jụọ! Mepụta a mfe nnyocha e mere ma zipụ ya ndị na-eso ụzọ gị, ndị na - akwado gị na ndị ahịa gị. Zoomerang na SurveyMonkey na-enye tọn ndebiri ndebiri nke ị nwere ike hazie site na itinye foto, akara ngosi gị, na agba ụlọ ọrụ.
Jụọ ndị ahịa gị bụ, otu ha si eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, yana afọ ojuju ha. Ka ị na - amata ndị ahịa gị na ihe ha chọrọ, ọ ga - abụrịrị gị ị ga - enye ha ozi ha ga - ahụ na ọ bara uru ma dị mma.
2. Kwalite, kwalite, kwalite
Mepụta ọdịnaya dị ukwuu bụ nzọụkwụ kachasị mkpa, mana ọ bụ naanị nzọụkwụ mbụ. Ozugbo imepụta ọdịnaya ahụ, ị ​​ga-akwalite ya ruo ogologo ka o kwere mee. Nke ahụ pụtara Tweeting banyere ya, biputere ya na ibe Facebook gị, yana ibe otu njikọ Linkedin dị mkpa. Cheta iwu 80-20, nke kwuru na ị kwesiri ịzaghachi ọdịnaya ndị ọzọ 80% nke oge, ma kwalite ọdịnaya nke gị naanị 20% nke oge ahụ. Ọ bụ usoro ebumpụta ụwa bụ isi-ọ dịghị onye chọrọ ịnụ nkwado mumbo jumbo kwa ụbọchị.
Mana na omume ị nwere ike ịme ka eriri ahụ dị ntakịrị, ọ na-aga ma ụzọ abụọ. Ikwu okwu na blọọgụ ma ọ bụ otu ederede Facebook nke onye ofufe gị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye njikọ gị na saịtị gị. Re-tweet ozi ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọrụ gị kwuru, ọ bụrụ na ọ bụghị asọmpi ziri ezi ma ọ ga-abara ndị ahịa gị uru. Lelee Azịza Linkedin, na mgbe mmadụ nwere nsogbu nke ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa gị nwere ike inye aka dozie, nye ya. Naanị jide n'aka na ị weghachite ihu ọma site na ịza ajụjụ, re-tweeting, na mmasị na oke oke gị (80%).
3. Ọpụpụ Ọpụpụ Bụ Soo 2011
Bọchị ndị a ọ bụ ihe gbasara Inbound Marketing, nke kwesịrị ịbịaru onwe gị ozugbo ị mechara usoro 1 na 2. Site na ịnye ndị ahịa gị ozi na-atọ ụtọ, nke bara uru, ma na-akwalite ya site na ọwa kwesịrị ekwesị, ọ gaghị ewe oge tupu ị kwado onwe gị dịka ọkachamara a tụkwasịrị obi n'ọhịa gị. Ndị mmadụ ga-abịa na blọọgụ ụlọ ọrụ akpaaka gị, ọ bụghị naanị mgbe ha chọrọ ịzụ ụgbọ ala, mana mgbe ha chọrọ ịmata ihe ndị mmadụ na-ekwu gbasara ụdị 2012. Ha ga - amalite iwepụtakwu oge na saịtị gị ma jiri ya nyochaa ya ebe ọ bụ na ha maara na ị na - eziga mgbe niile (nudge nudge, wink wink). Ahịa gị ga-agbasa na oge ndị mmadụ na-abịa na saịtị gị, nke ahụ ga-adaba na otu ị si eme nke 1 na 2.
4. Atụla egwu ndị na-adịghị mma: Na-eme mkpọtụ!
Ọtụtụ SMB ndị na-eme mkpebi m na-agwa okwu na-atụ ụjọ na ịga mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-emepe ha ụdị mgbasa ozi niile na-adịghị mma. Achọtala m aka mbụ a - ọ ga - esiri otu izu ike ịgafe ebe ọ na - enweghị onye ahịa pee na - abanye na ibe Facebook anyị, ma ọ metụtara ngwaahịa anyị ma ọ bụ na ọ bụghị. Nke a nwere ike ịtụ ụjọ, amaara m, mana ị ga-echeta na ndị ahịa nwere ekele maka ihe egwu ị na-ewere site na itinye onwe gị ebe ahụ, ha ga-asọpụrụ gị maka ya. Na njedebe nke ụbọchị, ha ga na-enyo ụlọ ọrụ ndị na-enwetụbeghị mmekọrịta mmadụ na ibe ha anya karịa nke na-enweta ụfọdụ okpomọkụ na ibe Twitter ha oge ụfọdụ. Na maka ọ bụla disgruntled ahịa, anyị nwere 5 afọ ojuju ndị ikenye ha afọ ojuju na anyị ngwaahịa. Ihe ha kwuru na-aba uru maka akara anyị karịa nke ndị na-adịghị mma na-emerụ ahụ.
Naanị cheta ịza nzaghachi n'oge, n'ụzọ ziri ezi. Onye ahịa ahụ nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu mgbe niile, mana nkụda mmụọ ọ bụla ha na-enwe bụ ihe ziri ezi, ya mere kweta nke ahụ, ma nye usoro ihe enyemaka na-enye aka ha nwere ike ime iji dozie ọnọdụ ahụ. Ma ọ bụghị nzaghachi niile ga-abụ ihe ọjọọ! Mgbe mmadụ kwụrụ gị otito, kelee ha maka ya, ma jụọ ha ma ha ga-adị njikere ịme ihe ahịa ọma akụkọ na gị. Ha na-enweta olu ha (na akara) ebe ahụ, ị ​​na-akwado nkwado ha, mmadụ niile na-enwetakwa mmeri.
Enwere m olile anya na ndụmọdụ 4 a ga - enyere gị aka ịmalite n'ọchịchọ ị na - elekọta mmadụ! Biko kwuo nzaghachi gị, ndụmọdụ ndị ọzọ, ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla ị nwere! Nwee obi ụtọ mmekọrịta!
Tags: omume kacha mmaelekọta mmadụ mediausoro mgbasa ozi kacha mmamgbasa ozi mgbasa ozindụmọdụ gbasara mmadụ
Tụgharị Adreesị Email na Social ọgụgụ isi
Jenụwarị 11, 2012 na 12:35 PM
Ndewo Hanna! Anyị kwenyere kpamkpam na isi ihe ị kwuru ebe a. Mgbasa mgbasa ozi bụ ezigbo ikpo okwu maka azụmaahịa iji wulite mmata ma nweta ọtụtụ ebumnuche ndị ọzọ ha nwere. N'iji ya rụọ ọrụ nke ọma agbanyeghị, ọ dịịrị ụfọdụ ndị siri ike ọrụ. Anyị na-atụ anya na afọ ọhụrụ ga-eweta ụzọ ọhụrụ eji eji mgbasa ozi mmekọrịta. Ekwesiri ka ndi azumazu ahia duputa ha nke oma ka ha we di nma. Agbanyeghị Great post!
Jenụwarị 12, 2012 na 4:53 PM
Inbound bụ kpọmkwem ihe anyị zubere maka afọ a. Naanị anyị na-ede usoro mgbasa ozi anyị na achọpụtara m na post a bara ezigbo uru, yabụ echere m na m ga-agwa gị dịka m chọrọ ka ndị mmadụ kwuo okwu na post m!
Aga m ewere ndụmọdụ gị banyere nyocha ndị na-ege anyị ntị. Nnukwu echiche.